Inqubomgomo Yelungelo Lokukopa
Imigomo Yokunikezwayo Kwekhokhelwayo
Imigomo Yokusetshenziswa ye-Spotify
Insizakalo ye-Spotify Enikezwa Yithi.
Ukusebenzisa Kwakho Insizakalo ye-Spotify
Okuqukethwe Namalungelo Empahla Yobuhlakani
Ukuxhaswa Kwamakhasimende, Ulwazi, Imibuzo Nezikhalazo
Sicela ufunde Lemigomo Yokusetshenziswa (** "Lemigomo**") ngokucophelela njengoba ilawula ukusetshenziswa kwakho (okubandakanya ukufinyelela) kwezinsizakalo ezenziwe ngezifiso zepotify zomculo osakazwayo nokunye okuqukethwe, kuhlanganise wonke amawebhusayithi ethu nezinhlelo zokusebenza ze-software ezihlanganisa noma ezixhumanisa Nalemigomo (ngokuhlanganyela, "Insizakalo ye-Spotify") nanoma yimuphi umculo, amavidiyo, ama-podcast, noma enye into etholakala Ngensizakalo ye-Spotify ("Okuqukethwe").
Ukusetshenziswa Kwensizakalo ze-Spotify kungakhonjelwa emigomeni nemibandela eyengeziwe eyethulwe yi-Spotify, efakwa yile nkomba Kulemigomo.
Ngokubhalisela, noma ngale kwalokho usebenzisa, Insizakalo ye-Spotify, uyavumelana Nalemigomo. Uma ungavumelani Nalemigomo, akumele-ke usebenzise Insizakalo ye-Spotify noma ufinyelele noma yikuphi Okuqukethwe.
Lemigomo iphakathi kwakho ne-Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Sweden.
Izidingo zobudala nokufaneleka
Ukuze usebenzise Insizakalo ye-Spotify futhi ufinyelele noma yikuphi Okuqukethwe, udinga (1) ukuba neminyaka engu-13 (noma iminyaka elinganayo ezweni lakini) noma ngaphezulu, (2) ube nemvume yomzali noma umnakekeli uma usemncane ezweni lakini; (3) ube namandla okwenza isivumelwano esibophezelayo nathi futhi ungavinjelwe ukwenza kanjalo ngaphansi kwanoma yimiphi imithetho esebenzayo, futhi (4) uhlala ezweni lapho Insizakalo itholakala khona. Wethembisa futhi ukuthi noma yimiphi imininingwane yokubhalisa oyithumela ku-Spotify iyiqiniso, inembile, futhi iphelele, futhi uyavuma ukuyigcina injalo ngaso sonke isikhathi Uma usemncane ezweni lakini, umzali wakho noma umnakekeli wakho kuzodingeka angene Kukemigomo esikhundleni sakho. Ungathola imininingwane eyengeziwe mayelana nezidingo zeminyaka ephansi kwinqubo yokubhalisa. Uma ungahlangabezani nezimfuneko zeminyaka ephansi i-Spotify ngeke ikwazi ukukubhalisa njengomsebenzisi.
2. Insizakalo ye-Spotify Enikezwa Yithi.
Izinketho Zensizakalo ye-Spotify
Sinikeza izinketho eziningi Zensizakalo ye-Spotify. Ezinye izinketho Zensizakalo ye-Spotify zinikezwa mahhala, kuyilapho ezinye izinketho zidinga inkokhelo ngaphambi kokuba zitholakale ("Izikhokhelo Ezikhokhelwayo"). Futhi singanikela ngezinhlelo ezikhethekile zokuthuthukisa, ubulungu, noma izinsizakalo, kuhlanganise nokunikezwa kwemikhiqizo nezinsizakalo zezinye izinkampani. Asinasibopho semikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa yizinkampani ezinjalo.
Insizakalo Engenamkhawulo ingase ingatholakali kubo bonke abasebenzisi. Sizochaza ukuthi yiziphi izinsizakalo ezitholakalayo kuwe lapho ubhalisela izinsizakalo. Uma ukhansela okubhalisele Ensizakalweni Engenamkhawulo, noma uma ukubhalisela kwakho Insizakalo Engenamkhawulo kuphazamisekile (ngokwesibonelo, uma ushintsha imininingwane yakho yokukhokha), ungase ungakwazi ukubhalisela Insizakalo Engenamkhawulo. Yazi ukuthi Insizakalo Engakhawulelwe inganqanyulwa ngokuzayo, lapho-ke ngeke usakhokhiselwa Insizakalo.
Ngezikhathi ezithile, thina noma abanye esikhundleni sethu banganikela ngovivinyo Lwezikhokhelo Ezikhokhelwayo isikhathi esithile ngaphandle kokukhokha noma ngesilinganiso esincishisiwe ("Uvivinyo"). Ngokusebenzisa Insizakalo ye-Spotify Ngovivinyo, uyavumelana Nemigomo Yokunikezwa Kwemali Yokukhuthaza ye-Spotify.
Izicelo Zenye Inkampani, Amadivayisi ne-Software Yomthombo Ovulekile
Insizakalo ye-Spotify ingahlanganiswa, noma ingaxhumana, nezinye izinhlelo zokusebenza nenkampani yangaphandle, amawebhusayithi, kanye nezinsizakalo ("Izinhlelo Zenkampani Yangaphandle") namakhompyutha enkampani yangaphandle, izingcingo eziphathwayo, amathebulethi, amadivayisi afakwayo, izipikha, namanye amadivayisi ("Amadivayisi"). Ukusebenzisa kwakho Izicelo Namadivayisi Avela Kwenye Inkampani kungase kube ngaphansi kwemigomo, imibandela nezinqubomgomo ezengeziwe ezinikezwe inkampani yangaphandle esebenzayo. I-Spotify ayiqinisekisi ukuthi Izicelo Namadivayisi Ezinkampani Eziseceleni kuzohambisana Nensizakalo ye-Spotify.
Ukulinganiselwa Kwensizakalo Nokuguqulwa
Sisebenzisa ukunakekela namakhono afanele ukugcina Insizakalo ye-Spotify isebenza futhi ukuze sikunikeze isipiliyoni somsindo, owenzelwe wena uqobo. Kodwa-ke, ukunikeza insizakalo yethu nokutholakala kwayo kungashintsha ngezikhathi ezithile futhi ngokuya ngemithetho esebenzayo, ngaphandle kwesibopho kuwe; ngokwesibonelo:
Insizakalo ye-Spotify ingahlangabezana nokuphazamiseka kwesikhashana ngenxa yobunzima bezobuchwepheshe, ukunakekelwa noma ukuhlolwa, noma izibuyekezo, kuhlanganise lezo ezidingekayo ukubonisa ushintsho emithethweni efanele nezimfuneko zokulawula.
Sihlose ukuguqula nokwenza ngcono Izinsizakalo zethu njalo, futhi singaguqula, simise okwesikhashana, noma simise (unomphela noma okwesikhashana) ukuhlinzeka yonke ingxenye Yensizakalo ye-Spotify (kuhlanganise nemisebenzi ethile, izici, izinhlelo zokubhaliselwe kanye neminikelo yokuthuthukisa).
I-Spotify ayinaso isibopho sokuhlinzeka noma yikuphi okuqukethwe okuthile Ngensizakalo ze-Spotify, futhi i-Spotify noma abanikazi abakhona bangasusa izingoma ezithile, amavidiyo, ama-podcast, nokunye Okuqukethwe ngaphandle kwesaziso.
Uma unemali ekhokhelwa kusengaphambili ngokuqondile ku-Spotify Ngesikhokhelo Esikhokhelwayo i-Spotify esiyekayo ngaphambi kokuphela Kwesikhathi sakho Esikhokhelwa Kusengaphambili (njengoba lelo gama lichazwa esigabeni sokukhokha nokukhansela ngezansi), i-Spotify izokubuyisela imali ekhokhelwe kuqala Yesikhathi Esikhokhelwa Kusengaphambili nganoma iyiphi ingxenye engasetshenziswanga Yesikhokhelo Esikhokhelwayo sakho samanje ngemva kokuyeka okunjalo. Imininingwane ye-akhawunti yakho kanye nemali oyikhokhayo kufanele ibe sesikhathini ukuze sikwazi ukukubuyisela imali.
I-Spotify ayinasibopho kuwe, noma yisiphi isibopho sokukubuyisela imali, maqondana ne-intanethi noma okunye ukuphuma kwensizakalo noma ukwehluleka okubangwa yizenzo zeziphathimandla zikahulumeni, izinkampani zangaphandle noma imicimbi engaphezu kwamandla ethu.
3. Ukusebenzisa Kwakho Insizakalo ye-Spotify
Ukwakha i-akhawunti ye-Spotify
Ungase udinge ukwakha i-akhawunti ye-Spotify ukusebenzisa konke noma ingxenye Insizakalo ye-Spotify. Igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi zenzelwe ukusetshenziswa kwakho kuphela futhi kufanele kugcinwe kuyimfihlo. Uyaqonda ukuthi unesibopho sakho konke ukusetshenziswa (kufaka phakathi noma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe) kwegama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Yazisa ithimba lethu Lensizakalo Yamakhasimende ngokushesha uma igama lakho lomsebenzisi noma iphasiwedi ilahlekile noma intshontshiwe, noma uma ukholelwa ukuthi kube nokufinyelela okungagunyaziwe ku-akhawunti yakho.
I-Spotify ingabuyisa, noma ifune ukuthi ushintshe, igama lakho lomsebenzisi nganoma yisiphi isizathu.
Amalungelo akho okusebenzisa insizakalo ye-Spotify
Ukufinyelela Izinsizakalo ze-Spotify
Kuncike ekuthobeleni kwakho Lemigomo (kuhlanganise noma yimiphi eminye imigomo nemibandela esebenzayo), sikunikeza imvume elinganiselwe, engakhethiyo, ehlehliswayo yokwenza ukusetshenziswa komuntu, okungekhona okokuthengisa Kwensizakalo ye-Spotify Nokuqukethwe (ngokuhlangene, "Ukufinyelela"). Lokhu Kufinyelela kuzohlala kusebenza ngaphandle kokuthi kupheliswe nguwe noma yi-Spotify. Uyavuma ukuthi ngeke usabalalise kabusha noma udlulise insizakalo ye-Spotify noma Okuqukethwe.
Izinhlelo zokusebenza ze-software ye-Spotify Nokuqukethwe kunamalayisense, awathengiswa noma adluliselwe kuwe, futhi i-Spotify nabanikezeli bayo bamalayisense bagcina ubunikazi bawo wonke amakhophi ezinhlelo zokusebenza ze-software ye-Spotify Nokuqukethwe noma ngabe sekufakiwe Kumadivayisi akho.
Amalungelo obunikazi e-Spotify
Insizakalo ye-Spotify Nokuqukethwe kuyimpahla yabanikezeli bamalayisense be-Spotify noma i-Spotify. Zonke izimpawu zokuhweba ze-Spotify, izimpawu zensizakalo, amagama ezentengiselwano, ama-logo, amagama esizinda, nanoma yiziphi ezinye izici zomkhiqizo we-Spotify ("Spotify Brand Features") yimpahla ye-Spotify kuphela noma abahlinzeki belayisense yayo. Lemigomo ayikunikezi amalungelo okusebenzisa noma yiziphi izici Zomkhiqizo we-Spotify noma ngabe ezentengiso noma ezingezona ezentengiso.
Uyavuma ukuthobela Iziqondiso Zomsebenzisi ze-Spotify futhi ungasebenzisi Insizakalo ye-Spotify, Okuqukethwe, noma enye ingxenye yayo nganoma iyiphi indlela engavunyelwe ngokucacile Yilemigomo.
Ungathenga Isikhokhelo Esikhokhelwayo ngokuqondile ukusuka ku-Spotify noma enkampanini yangaphandle noma:
● ukukhokha imali yesikhokhelo kusengaphambili njalo ngenyanga noma esinye isikhawu esiphindayo esidalulwe kuwe ngaphambi kokuthenga kwakho; noma
● ukukhokha kusengaphambili kukunikeza ukufinyelela Ensizakalweni ye-Spotify ngesikhathi esithile ("Isikhathi Esikhokhelwa Ngaphambili").
Amanani entela abalwa ngokususelwa emininingwaneni oyinikezayo nezinga elisebenzayo ngesikhathi sokukhokhiswa kwakho kwanyangazonke.
Uma uthenga ukufinyelela Kwesikhokhelo Esikhokhelwayo ngenkampani yangaphandle, imigomo nemibandela ehlukene naleyonkampani yangaphandle ingasebenza ekusebenziseni kwakho Insizakalo ye-Spotify ukwengeza Kulemigomo. Uma uthenga Isikhokhelo Esikhokhelwayo usebenzisa ikhodi, ikhadi lesipho, ukunikezwa okukhokhelwa kusengaphambili, noma okunye okunikezwayo noma okuthengiswe yi -Spotify oma esikhundleni se-Spotify ukuze ufinyelele Kokubhaliselwe Okukhokhelwayo ("Amakhodi"), ngalokhu uvumelana neSpotify Imigomo Yekhadi.
Izinguquko zamanani nentela
I-Spotify ingase ishintshe inani lezikhathi Zesikhokhelo Esikhokhelwayo, kuhlanganise imali yokubhaliselwe ekhokhwa ngokuphindaphindwayo, Isikhathi Esikhokhelwa Kusengaphambili (sezikhathi ezingakakhokhelwa), noma Amakhodi (achazwe ngenhla), futhi izokwazisa noma yiziphi izinguquko zamanani kuwe kusengaphambili ngesaziso esifanele. Izinguquko zentengo zizoqala ukusebenza esikhathini sesikhokhelo esilandelayo ngemuva kosuku lokushintshwa kwentengo. Ngokuya ngomthetho osebenzayo, ngokuqhubeka nokusebenzisa Insizakalo ye-Spotify ngemuva kokushintshwa kwentengo, uzobe usuyamukele intengo entsha. Uma ungavumelani noshintsho lwentengo, ungalwenqaba ushintsho ngokuzikhipha ohlwini Lwesikhokhelo Esikhokhelwayo ngaphambi kokuba ushintsha kwentengo kuqale ukusebenza.
Amanani entela asuselwa ezilinganisweni ezisebenza ngesikhathi sokukhokhiswa kwakho kwanyangazonke. Lamanani angashintsha ngokuhamba kwesikhathi ng ezimfuneko zentela yendawo ezweni, esifundazweni, endaweni noma ngisho nasedolobheni lakini. Noma yiluphi ushintsho ezingeni lentela luzosetshenziswa ngokuzenzakalelayo ngokwemininingwane ye-akhawunti oyinikezayo
Ngaphandle Kwesikhokhelo Esikhokhelwayo Sesikhathi Sokokhokhelwa Ngaphambili, inkokhelo yakho eya ku-Spotify noma inkampani yangaphandle othenge ngayo Isikhokhelo Esikhokhelwayo izovuselelwa ngokuzenzakalela ekupheleni kwesikhathi sesikhokhelo esisebenzayo, ngaphandle kokuthi ukhansele Isikhokhelo Esikhokhelwayo ngaphambi kokuphela kwesikhathi sesikhokhelo samanje. Xhumana nethimba lethu Lokuxhaswa Kwamakhasimende lapha ukuthola imiyalo yokuthi ungakhansela kanjani. Ukukhanselwa kuzosebenza ngosuku olulandelayo ngemuva kosuku lokugcina lwesikhathi sokubhaliselwe kwamanje, futhi uzokwehliselwa ohlotsheni lwamahhala Lwensizakalo ye-Spotify. Asinikezi ukubuyiselwa kwemali izikweletu nganoma yisiphi isikhathi sokubhaliselwe okuyingxenye, ngaphandle kwalapho kushiwo ngokusobala Kulemigomo.
Uma uthenge Isikhokhelo Esikhokhelwayo usebenzisa ikhodi, isikhokhelo sakho sizonqamuka ngokuzenzakalelayo ekupheleni kwesikhathi esishiwo kwikhodi, noma uma kunemali esele engakhokhiwe eyanele ukukhokhela Insizakalo ye-Spotify.
Uma ubhalisela Isivivinyo, uyavuma ukuthi ilungelo lokuhoxa Lesikhokhelo Esikhokhelwayo othola uvivinyo lwaso liphela ezinsukwini eziyishumi nane (14) ngemuva kokuqala Uvivinyo. Uma ungakhanseli Isikhokhelo Esikhokhelwayo ngaphambi kokuphela Kovivinyo, ulahlekelwa yilungelo lakho lokuzikhipha bese ugunyaza i-Spotify ukuthi ikukhokhise ngokuzenzakalela intengo okuvunyelenwe ngayo inyanga ngayinye uze ukhansele Isikhokhelo Esikhokhelwayo. Ezivivinyweni ezingaphansi kwezinsuku eziyishumi nane (14), uyavuma ngokusobala ukuthi sikunikeze insizakalo ekhokhelwayo ngokushesha ngemuva kokuphela Kovivinyo lwakho nokuthi kusukela lapho ulahlekelwe yilungelo lakho lokuhoxa.
Uma uthenga Isikhokhelo Esikhokhelwayo ngaphandle Kokuvivinywa, uyavuma ukuthi unezinsuku eziyishumi nane (14) ngemuva kokuthenga kwakho ukuze ukhiphe nganoma yisiphi isizathu futhi kufanele usikhokhele ngezinsizakalo ezinikeziwe kuze kube yisikhathi ositshela ngaso ukuthi ushintshe umqondo wakho. . Uvuma ngokusobala ukuthi sikunikeze insizakalo ngokushesha ngemuva kokuthenga kwakho, ukuthi ulahlekelwe yilungelo lakho lokuzikhipha, futhi ugunyaze i-Spotify ukuthi ikukhokhise ngokuzenzakalela inyanga nenyanga uze ukhansele.
Sisungule iziqondiso zokusebenzisa Insizakalo ye-Spotify, ukuqinisekisa ukuthi Insizakalo ye-Spotify ihlala ijabulisa wonke umuntu ("Iziqondiso Zomsebenzisi ze-Spotify"). Ekusebenziseni Insizakalo ye-Spotify, kufanele uthobele Iziqondiso Zomsebenzisi ze-Spotify, kanye nayo yonke imithetho esebenzayo, imithetho, nemithethonqubo, futhi uhloniphe impahla yobuhlakani, ubumfihlo namanye amalungelo ezinkampani zangaphandle.
Uma usungula i-akhawunti ye-Spotify esikhundleni senkampani, inhlangano, ibhizinisi, noma umkhiqizo ("Umkhiqizo," ne-akhawunti enjalo "i-Akhawunti Yomkhiqizo"), amagama athi "wena" no- "eyakho," "njengoba esetshenziswe kuyo yonke Lemigomo (kuhlanganise neminye imigomo nemibandela ye-Spotify afakwe yireferensi lapha), asebenza kini Nasemkhiqizweni.
Uma wenza i-Akhawunti Yomkhiqizo, umele futhi uqinisekisa ukuthi ugunyaziwe ukunikeza zonke izimvume namalayisense ahlinzekwe Kulemigomo (kuhlanganise noma yimiphi eminye imigomo nemibandela ye-Spotify) nokubophezela Umkhiqizo Kulemigomo.
Umkhiqizo ungalandela abasebenzisi futhi wakhe futhi wabelane ngohlu lokudlalwayo, inqobo nje uma Umkhiqizo ungathathi sinyathelo esisho ukuvuma noma ubudlelwane bezentengiselwano phakathi Komkhiqizo nomsebenzisi olandelwayo, umculi, umbhali wezingoma, noma omunye umuntu, ngaphandle uma Umkhiqizo uzitholele ngokwawo amalungelo okusho ukuvuma okunjalo. Ngaphezu kwalokho, Imikhiqizo kufanele ibe sobala kubasebenzisi bethu mayelana nokudalula noma yikuphi ukuvuma noma ukucatshangelwa okunikezwa abaculi, ababhali bezingoma, abasebenzisi, noma elinye iqembu futhi kufanele bathobele yonke imithetho esebenzayo, imithethonqubo namakhodi okusebenza lapho benza lokho okushiwo ngaphambili.
Ukulawulwa kokuthunyela nokugunyazwa
Imikhiqizo ye-Spotify ingaba ngaphansi kwe-U.S. imithetho nemithethonqubo yokulawula ukuthumela nokuthumela kabusha kwamanye amazwe noma imithetho efanayo esebenza kwezinye iziphathimandla, kuhlanganise Imithethonqubo Yokulawulwa Kokuthumela ("EAR") enakekelwa yi-U.S. UMnyango Wezohwebo, ukuhweba kanye nokugunyazwa kwezomnotho okugcinwe Yihhovisi Lomnyango Wezezimali Lokulawulwa Kwezimpahla Zangaphandle ("OFAC"), kanye ne-International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") enakekelwa uMnyango Wezwe. Uqinisekisa ukuthi (1) awuhlali kunoma yiliphi izwe lapho i-United States ivimbele impahla noma ifake ezinye ugunyazo lwezomnotho; futhi (2) awulona iqembu elinqatshiwe njengoba kuchaziwe kunoma yimiphi imithetho noma imithethonqubo esebenzayo yokuthumela noma yokuthumela kabusha noma imithetho efanayo esebenza kwezinye iziphathimandla noma ebalwe ngenye indlela kunoma iyiphi i-U.S. uhlu lukahulumeni lwamaqembu angavumelekile noma avinjelwe.
Uyavuma ukuthobela yonke imithetho kanye nemithethonqubo yokulawula ukuthumela nokuthumela kabusha, kuhlanganise ngaphandle komkhawulo i-EAR nezijeziso zezohwebo nezomnotho ezigcinwe yi-OFAC. Ngokuqondile, uyavuma ukuthi neke – ngokuqondile noma ngokungaqondile – usebenzise, uthengise, uthumele, uthumele kabusha, udlulise, uphambukise, ukhiphe, noma ngokunye ulahle noma yimiphi imikhiqizo, i-software, noma ubuchwepheshe (kuhlanganise imikhiqizo etholakala noma esuselwa ebuchwephesheni obunjalo) obutholwe ku-Spotify ngaphansi Kwalemigomo kunoma iyiphi indawo, ibhizinisi, noma umuntu noma ukusetshenziswa okuvinjelwe yi-EAR, imvume yezohwebo neyezomnotho egcinwa yi-OFAC, noma eminye imithetho noma imithethonqubo esebenzayo yase-United States noma amanye amandla ngaphandle kokuthola ukugunyazwa okudingekayo kwangaphambili okuvela kuziphathimandla zikahulumeni ezinekhono njengoba kudingeka kuleyomithetho nezimiso.
4. Okuqukethwe Namalungelo Empahla Yobuhlakani
Okuqukethwe okufaka ensizakalweni
Abasebenzisi be-Spotify bangathumela, balayishe, noma bahlanganyele okunye okuqukethwe Ensizakalweni ye-Spotify ("Okuqukethwe Komsebenzisi"). Ukugwema ukungabaza, "Okuqukethwe Komsebenzisi" kuhlanganisa lonke ulwazi, izinto nokunye okuqukethwe okufakiwe, okwenziwe, okulayishiwe, okuhanjisiwe, okusatshalalisiwe, noma okuthunyelwe Ensizakalweni ye-Spotify (kuhlanganise Nomphakathi Wokuxhasa we-Spotify) ngabasebenzisi.
Nguwe wedwa onesibopho sakho konke Okuqukethwe Komsebenzisi okuthumelayo.
Wethembisa ukuthi, maqondana Nokuqukethwe Komsebenzisi okuthumela ku-Spotify, (1) ungumnikazi noma unelungelo lokuthumela Okuqukethwe Komsebenzisi okunjalo; (2) Okuqukethwe Komsebenzisi okunjalo, noma ukusetshenziswa kwakho yi-Spotify ngokulandela ilayisense enikezwe ngezansi, akwe-: (i) -phuli Lemigomo, umthetho osebenzayo, noma impahla yobuhlakani noma amanye amalungelo kunoma iyiphi enye inkampani yangaphandle; noma (ii) lokho Okuqukethwe Komsebenzisi akusho ukuhlobana noma ukugunyazwa kwakho noma Okuqukethwe Komsebenzisi kwakho yi-Spotify noma omunye umculi, ibhendi, ilebula, noma omunye umuntu noma inhlangano ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela ku-Spotify noma lowo muntu noma lelo bhizinisi.
Uma uthumela noma wabelana Ngokuqukethwe Komsebenzisi noma olunye ulwazi Ensizakalweni ye-Spotify, sicela wazi ukuthi okuqukethwe nolunye ulwazi kuzotholakala esidlangalaleni, futhi kungasetshenziswa futhi kwabelwane ngakho kabusha ngabanye Ensizakalweni ye-Spotify nakuyo yonke iwebhu, ngakho-ke sicela usebenzise isexwayiso ekuthumeleni noma ekwabelaneni Ensizakalweni ye-Spotify, futhi ukhumbule izilungiselelo ze-akhawunti yakho. I-Spotify asinasibopho salokho wena noma abanye enikuthumelayo noma enabelana ngakho Ensizakalweni ye-Spotify.
Ukuqapha okuqukethwe komsebenzisi
I-Spotify ingakwenza, kodwa ayinaso isibopho sokuqapha noma sokubuyekeza Okuqukethwe Komsebenzisi. I-Spotify inelungelo lokususa noma ukuyekisa ukufinyelela kunoma yikuphi Okuqukethwe Komsebenzisi nganoma yisiphi isizathu noma ngaphandle kwaso. I-Spotify ingenza lokhu ngaphandle kokukwazisa ngaphambilini.
Amalayisense osinika wona
Ugcina ubunikazi bokuqukethwe kwakho komsebenzisi lapho ukuthumela Ensizakalweni. Kodwa-ke, ukuze senze Okuqukethwe Komsebenzisi kwakho kutholakale Ensizakalweni ye-Spotify, sidinga ilayisense elinganiselwe evela kuwe yalokhu Okuqukethwe Komsebenzisi. Ngokunjalo, unika i-Spotify ilayisense engakhethi, edluliswayo, enamalayisense amancane, engakhokhelwa, ekhokhelwe ngokuphelele, engenakuguqulwa, ilayisensi yomhlaba wonke yokwenza busha, ukwenza kutholakale, kwenziwe futhi kuboniswe, kuhunyushwe, kuguqulwe, kwakhiwe imisebenzi evela kokunye, isabalalise, futhi uma kungenjalo isebenzise noma yikuphi Okuqukethwe Komsebenzisi okunjalo nganoma iyiphi indlela, noma ngabe kukodwa noma kuhlanganiswe nokunye Okuqukethwe noma izinsiza, nganoma yimuphi umqondo nanoma iyiphi indlela, umkhuba noma ubuchwepheshe, noma ngabe kuyaziwa manje noma ngemuva kwalokho, maqondana Nensizakalo ye-Spotify. Lapho kusebenza khona futhi ukufika ezingeni elivunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo, nawe uyavuma ukuyekelela, nokungaphoqeleli, noma yimaphi "amalungelo okuziphatha" noma amalungelo alinganayo, njengelungelo lakho lokwaziwa njengombhali wanoma yikuphi Okuqukethwe Komsebenzisi, kuhlanganise Nempendulo, nelungelo lakho lokwenqaba ukuphathwa ngokululazayo Kokuqukethwe Komsebenzisi.
Uma uhlinzeka ngemibono, iziphakamiso, noma enye impendulo maqondana nokusebenzisa kwakho Insizakalo ye-Spotify noma okunye Okuqukethwe ("Impendulo"), Impendulo enjalo ayiyona imfihlo futhi ingasetshenziswa yi-Spotify ngaphandle komkhawulo futhi ngaphandle kokuba ukhokhelwe. Impendulo ibhekwa njengohlobo Lokuqukethwe Komsebenzisi ngaphansi Kwalemigomo.
Usinika nelungelo (1) lokuvumela Insizakalo ye-Spotify ukuthi isebenzise iprosesa, umkhawulokudonsa, kanye nezingxenyekazi zekhompuyutha kuDivayisi yakho ukwenza lula ukusebenza Kwensizakalo ye-Spotify, (2) ukuhlinzeka ngokukhangisa kanye neminye imininingwane, nokuvumela abalingani bethu bebhizinisi ukuthi benze okufanayo, njengoba kuvunyelwe Ngenqubomgomo Yobumfihlo Ye-Spotify.
Kunoma iyiphi ingxenye Yensizakalo ye-Spotify, Okuqukethwe okufinyelelayo, kuhlanganise ukukhethwa nokubekwa kwayo, kungathonywa ukucatshangelwa kwezentengiso, kuhlanganise izivumelwano ze-Spotify nezinye izinkampani.
Okunye Okuqukethwe okunikwe ilayisense, okunikezwe, okwenziwe, noma okwenziwe kwatholakala yi-Spotify (isb., ama-podcast) kungafaka ukukhangisa, futhi i-Spotify ayibophezelekile kunoma yikuphi ukukhangisa okunjalo.
Izimangalo zokwephulwa komthetho
I-Spotify siyawahlonipha amalungelo abanikazi empahla yobuhlakani. Uma ukholelwa ukuthi noma yikuphi Okuqukethwe kwephula amalungelo akho elungelo lobunikazi, sicela ubheke Inqubomgomo Elungelo Lobunikazi ye-Spotify.
5. Ukuxhaswa Kwamakhasimende, Ulwazi, Imibuzo Nezikhalazo
Umphakathi Wokuxhasa we-Spotify
Umphakathi Wokuxhasa we-Spotify uyindawo yezingxoxo nokwabelana ngolwazi, amacebiso, nezinye izinto ezihlobene Nensizakalo ye-Spotify. Ngokusebenzisa Umphakathi Wokuxhasa we-Spotify, uvumelana Nemigomo Yomphakathi Nemigomo Yomphakathi.
Ukuxhaswa Kwamakhasimende, Ulwazi, Imibuzo, Isikhalazo
Ekuxhasweni kwamakhasimende ngemibuzo ephathelene ne-akhawunti kanye neyezinkokhelo ("Imibuzo Yokuxhaswa Kwamakhasimende"), sicela usebenzise izinsizakusebenza Zokuxhaswa Kwamakhasimende ezifakwe ohlwini engxenyeni ethi Mayelana Nathi iwebhusayithi yethu.
Uma unanoma yimiphi imibuzo ephathelene Nensizakalo ye-Spotify noma Lemigomo (kuhlanganise nanoma yimiphi imigomo nemibandela ye-Spotify efakwe lapha), sicela uxhumane Nensizakalo Yamakhasimende ye-Spotify ngokuvakashela ingxenye ethi Mayelana Nathi yewebhusayithi yethu.
Uma uhlala e-European Union, ungafaka futhi isikhalazo enkundleni ye-inthanethi yokuxazulula ezinye izingxabano (i-ODR-platform). Ungathola inkundla ye-ODR ngesixhumanisi esilandelayo: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
6. Izinkinga Nezingxabano
Ukumisa okwesikhashana nokumisa Izinsizakalo ze-Spotify
Lemigomo izoqhubeka nokusebenza kuwe ize iqedwe nguwe noma yi-Spotify. I-Spotify ingayinqamula Lemigomo (kuhlanganise nanoma yimiphi imigomo nemibandela eyengeziwe efakwe lapha) noma ikumise okwesikhashana ukufinyelela kwakho Insizakalo ye-Spotify nganoma yisiphi isikhathi uma sikholwa ukuthi wephule noma iyiphi Yalemigomo, uma siyeka ukuhlinzeka Ngensizakalo ye-Spotify noma iyiphi into ethile kuyo isaziso esifanele kuwe, noma njengoba sikholwa ukuthi siyadingeka ukuhambisana nomthetho osebenzayo. Uma wena noma i-Spotify unqamula Lemigomo, noma uma i-Spotify imisa okwesikhashana ukufinyelela kwakho Ensizakalweni ye-Spotify, uyavuma ukuthi i-Spotify, ngokuya ngemithetho esebenzayo, ngeke ibe nesibopho noma umthwalo kuwe, futhi (ngaphandle kwalapho kunikezwe ngokucacile Kulemigomo) i-Spotify ngeke ibuyise noma yimaphi amanani osuvele uwakhokhile. Unganqamula Lemigomo nganoma yisiphi isikhathi, lapho kungenzeka ungaqhubeki nokufinyelela noma ukusebenzisa Insizakalo yei-Spotify. Ukufunda ukuthi ungayinqamula kanjani i-akhawunti yakho ye-Spotify, sicela usebenzise izinsiza Zokuxhasa Amakhasimende ekhasini lethu le-Ngathi.
Izingxenye 4 (Okuqukethwe kanye Namalungelo Empahla Yobuhlakani), 3 (Ukusebenzisa kwakho Insizakalo ye-Spotify), 2 (Insizakalo ye-Spotify Ehlinzekwa Yithi), 6 (Izinkinga Nezingxabano), 7 (Mayelana Nalemigomo) lapha, kanye nanoma iyiphi enye ingxenye Yalemigomo, ngokusobala noma ngohlobo lwayo, okufanele ihlale isebenza noma ngemuva kokunqanyulwa Kwalemigomo, isinde ekunqanyulweni.
I-Spotify izohlinzeka Ngensizakalo ye-Spotify isebenzisa ukunakekelwa okufanele nekhono futhi ngokuya nganoma iyiphi incazelo Yensizakalo ye-Spotify enikezwe yi-Spotify, kodwa-ke, ngokuya ngalokho, Insizakalo ye-Spotify inikezwa "njengoba injalo" futhi "njengoba itholakala," ngaphandle kweziqinisekiso noma yiluphi uhlobo, noma ngabe luveza obala, luchaziwe, noma lusemthethweni. Ngaphezu kwalokho, i-Spotify nabo bonke abanikazi bokuqukethwe bayazilahla noma yiziphi iziqinisekiso ezibekiwe, ezisikiselwe, nezisemthethweni ngokuphathelene nokuqukethwe, kuhlanganise neziqinisekiso zohlobo olugculisayo, ukuthengiswa, ukufaneleka kwenjongo ethile, noma ukungaphuli umthetho. I-Spotify noma umnikazi wokuqukethwe akaqinisekisi ukuthi Insizakalo ye-Spotify noma okuqukethwe akunalo uhlelo olungalungile noma ezinye izinto eziyingozi. Ngaphezu kwalokho, i-Spotify ayimeleli, futhi ayigunyazi noma ithathe noma yimuphi umthwalo wemfanelo, nganoma yiziphi izinhlelo zokusebenza ezivela kwenye inkampani (noma okuqukethwe kukho), okuqukethwe ngumsebenzisi, amadivayisi noma yimuphi umkhiqizo noma insizakalo ekhangisiwe, ekhuthaziwe noma enikezwa yinkampani yangaphandle noma Ngensizakalo ye-Spotify noma nganoma iyiphi iwebhusayithi exhunyanisiwe, futhi i-Spotify ayinasibopho sanoma yikuphi ukuthengiselana phakathi kwakho nanoma ibaphi abahlinzeki abavela eceleni balokhu okungenhla. Asikho iseluleko noma ulwazi okuthole ngomlomo noma ngokubhala olusuka ku-Spotify oluyokwakha noma yisiphi isiqinisekiso esikhundleni se-Spotify. Njengoba usebenzisa Insizakalo ye-Spotify, ungase ube nokufinyelela ezicini zokuhlunga okuqukethwe okusobala, kepha ukusetshenziswa kwalezi zici kusengaholela kokunye okuqukethwe okusobala okuhlinzekwayo futhi akufanele uthembele ezicini ezinjalo ukuhlunga konke okuqukethwe okusobala. Lengxenye isebenza ngokugcwele okuvunyelwe ngumthetho osebenzayo.
Ezinye iziphathimandla azikuvumeli ukukhishwa ngaphandle kweziqinisekiso noma imikhawulo kumalungelo asebenzayo omthengi, ngakho-ke ukukhishwa nemikhawulo kulengxenye kungenzeka kungasebenzi kuwe futhi akukho lutho oluzothinta amalungelo akho asemthethweni.
Umkhawulo Wesikweletu Nesikhathi Sokufaka Isimangalo
Ngokomthetho osebenzayo, uyavuma ukuthi ikhambi lakho elilodwa nelikhethekile lezinkinga noma ukungagculiseki Ngensizakalo ye-Spotify liwukukhipha noma iyiphi i-software ye-Spotify nokuyeka ukusebenzisa Insizakalo ye-Spotify. Uyavuma ukuthi i-Spotify ayinaso isibopho noma isikweletu esivela noma esihlobene nezinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle noma okuqukethwe okwenziwe kwatholakala noma ngokuxhumene Nensizakalo ye-Spotify, futhi ngenkathi ubudlelwano bakho nezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle bungalawulwa yizivumelwano ezihlukene nalezo zinkampani zangaphandle, ikhambi lakho elilodwa futhi elikhethekile, maqondana ne-Spotify, kunoma yiziphi izinkinga noma ukunganeliseki nganoma yiziphi izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni noma okuqukethwe yilokho, ukukhipha noma ukuyeka ukusebenzisa lezo zinhlelo zezinkampani ezivela ngaphandle.
**Akunakwenzeka ukuthi i-Spotify, izikhulu zayo, abaninimasheya, abasebenzi, ama-ejenti, abaqondisi, izinkampani ezisizayo, abaxhumana nabo, abalandeli, ababelwe, abahlinzeki, noma abanikezeli bamalayisense bazoba nesibopho (1) sanoma yikuphi ukulimala okungaqondile, okukhethekile, okwenzekayo, okujezisayo, okuyisibonelo, noma okulandelwayo; (2) noma yikuphi ukulahleka kokusetshenziswa, idatha, ibhizinisi, noma inzuzo (noma ngabe kuqondile noma akuqondile), kuzo zonke izimo ezivela ngenxa yokusebenzisa noma ukungakwazi ukusebenzisa Insizakalo ye-Spotify, amadivayisi, izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni, noma uhlelo lokusebenza yokuqukethwe kwenkampani yangaphandle; noma (3) isikweletu esihlanganisiwe sazo zonke izimangalo eziphathelene Nensizakalo ye-Spotify, izinhlelo zokusebenza ezivela enkampanini yangaphandle, noma okuqukethwe kohlelo lokusebenza lwenkampani yangaphandle ngaphezu (a) kwamanani akhokhelwe wena ku-Spotify phakathi nezinyanga eziyishumi nambili ngaphambi kwesimangalo sokuqala ; noma (b) u-$ 30.00. Noma yisiphi isikweletu esinaso sokulahlekelwa obhekene nako sikhawulelwe ekulahlekelweni okwakubonakala kusengaphambili. **
Ukuze kucaciswe, lemigomo ayikhawuleli isibophezelo se-Spotify ngokukhwabanisa, ukumelela kabi inkohliso, ukufa noma ukulimala komuntu kuze kufike ezingeni lapho umthetho osebenzayo ungavimbela ukulinganiselwa okunjalo kanye nanoma yisiphi esinye isikweletu, ngokomthetho osebenzayo, esingavinjelwa noma sikhishwe.
**Ngaphandle kwalapho ukuvinjelwa okunjalo kunqatshelwe ngaphansi komthetho osebenzayo, noma yisiphi isimangalo esivela ngaphansi kwalemigomo kufanele siqaliswe (ngokufaka isicelo sokulamula noma ukufaka isenzo somuntu ngamunye ngaphansi kwesivumelwano sokulamula ngezansi) kungakapheli unyaka owodwa (1) ngemuva kosuku iqembu eliqinisekisa ngalo isimangalo lazi kuqala noma kufanele sazi ngesenzo, ukweqiwa, noma iphutha elenza isimangalo; futhi ngeke kube nelungelo kunoma yiliphi ikhambi lanoma yisiphi isimangalo esiqinisekisiwe phakathi naleso sikhathi. **
Amalungelo Enkampani Yangaphandle
Uyemukela futhi uyavuma ukuthi abanikazi Bokuqukethwe nabasabalalisi abathile (njengabahlinzeki be-app store) bangabazuzi abahlosiwe Balemigomo futhi banelungelo lokuphoqelela Lemigomo ngokuqondile ngokumelene nawe. Ngaphandle kwalokhu okushiwo kulesisigaba, Lemigomo ayihloselwe ukunikeza amalungelo kunoma ngubani ngaphandle kwakho ne-Spotify, futhi akunakwenzeka ukuthi Lemigomo yakhe noma yimaphi amalungelo abazuzi benye inkampani.
Uma ngabe ulayishe noma yiziphi izinhlelo zethu zokusebenza ze-software (ngakunye, i-"App") ku-Apple Inc. ("Apple") App Store noma uma usebenzisa i-App edivayisini ye-iOS, uyavuma ukuthi ufunde, waqonda, futhi wavumelana nesaziso esilandelayo mayelana ne-Apple. Lemigomo iphakathi kwakho ne-Spotify kuphela, hhayi ne-Apple, futhi i-Apple ayibophezelekile Ensizakalweni ye-Spotify nokuqukethwe kwayo. I-Apple ayinaso isibopho sanoma yikuphi ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokugcina nokunakekela maqondana Nensizakalo ye-Spotify. Uma Insizakalo ye-Spotify yehluleka ukuhambisana nanoma yisiphi isiqinisekiso esisebenzayo, ungazisa i-Apple futhi i-Apple izokubuyisela inani elifanele lentengo ye-App; futhi, kuze kufike ezingeni eliphezulu elivunyelwe umthetho osebenzayo, i-Apple ayinaso esinye isibopho sesiqinisekiso maqondana Nensizakalo ye-Spotify. I-Apple ayinasibopho sokubhekana nanoma yiziphi izimangalo zakho noma inkampani yangaphandle ehlobene Nensizakalo ye-Spotify noma onakho noma ukusetshenziswa Kwensizakalo ye-Spotify, kuhlanganise: (1) izimangalo zemfanelo yomkhiqizo; (2) noma yisiphi isimangalo Insizakalo ye-Spotify ehluleka ukuhambisana naso nanoma yiziphi izidingo ezifanele zomthetho noma zokulawula; (3) izimangalo ezivela ngaphansi kokuvikelwa kwabathengi noma umthetho ofanayo; kanye (4) nezimangalo maqondana nokwephulwa kwempahla yobuhlakani. I-Apple ayibophezelekile ekuphenyweni, ekuvikeleni, ekuxazululeni nasekukhishweni kwanoma yisiphi isimangalo esivela eceleni sokuthi Insizakalo ye-Spotify noma onakho nokusetshenziswa kwe-App kwephula amalungelo empahla yobuhlakani yenkampani yangaphandle. Uyavuma ukuthobela noma yimiphi imigomo evela kwenye inkampani, lapho usebenzisa Insizakalo ye-Spotify. I-Apple, kanye nezinkampani ezingaphansi kwe- Apple, zingabazuzi abavela eceleni Balemigomo, futhi ekwamukeleni kwakho le Migomo, i-Apple izoba nelungelo (futhi kuzothathwa ngokuthi lamukele ilungelo) lokuphoqelela le Migomo ngokumelene nawe njengomuntu wesithathu umzuzi wale Migomo.
Uyavuma ukubophezela futhi ubambe i-Spotify njengengenabungozi ukusuka noma ngokumelene nanoma yikuphi ukulahleka okuqondile okubonakalayo, ukulimala, nezindleko ezifanele (kuhlanganise nezimali nezindleko zommeli ezifanele) ezihlaselwe noma ezenziwe yi-Spotify ezivela noma ezihlobene: (1) nokwephula kwakho noma yikuphi Kulemigomo (kuhlanganise nanoma yimiphi imigomo nemibandela ye-Spotify efakwe lapha); (2) noma yikuphi Okuqukethwe Komsebenzisi okuthumelayo noma okunye okunikelayo; (3) noma yimuphi umsebenzi ohlanganyela kuwo noma ngokusebenzisa Insizakalo ye-Spotify; kanye (4) nokwephula kwakho noma yimuphi umthetho noma amalungelo enkampani yangaphandle.
Umthetho Olawulayo, Ukulamula Okugunyaziwe Nendawo
6.1 Umthetho Olawulayo / Amandla
Ngaphandle kokuthi kudingeke ngenye indlela ngemithetho ephoqelekile ezweni ohlala kulo, Izivumelwano (kanye nanoma yiziphi izingxabano/izimangalo ezingezona ezenkontileka ezivela noma ezihlobene nazo) zingaphansi kwemithetho yombuso noma yezwe ebhalwe ngezansi, ngaphandle kokubheka noma ukungqubuzana kwezimiso zomthetho.
Ngaphezu kwalokho, wena ne-Spotify niyavumelana ekuphathweni kwezinkantolo ezibalwe ngezansi ukuxazulula noma iyiphi ingxabano, isimangalo, noma impikiswano evelayo maqondana Nezivumelwano (kanye nanoma yiziphi izingxabano/izimangalo ezingezona ezenkontileka ezivela noma ezihlobene nazo), ngaphandle uma kungaphansi kwemithetho edingekayo, ungakhetha ukuletha izinyathelo zomthetho ezweni ohlala kulo, noma kudingeka ukuthi silethe inqubo yezomthetho ezweni ohlala kulo kuphela
Izwe noma isifunda
Wonke amanye amazwe nezifunda lapho kutholakala khona i-Spotify. E-Sweden Okukhethekile; Izinkantolo zase-Sweden
e-Bulgaria, e-Cyprus, e-Estonia, e-France, e-Hong Kong, e-Latvia, e-Lithuania, e-Luxembourg, e-Malta, e-Monaco, e-Norway, e-Philippines, e-Portugal, e-Slovakia, e-Spain, e-Turkey Imithetho yase-Sweden Okungakhethekile; Izinkantolo zase-Sweden
E-Brazil Imithetho yase-Brazil Okukhethekile; Izinkantolo Zombuso Nezamazwe Zase-São Paulo, Izwe lase-São Paulo, e-Brazil
e-Canada Akusebenzi kubahlali base-Quebec: Imithetho Yesifundazwe sase-OntarioIzakhamuzi zase-Quebec: Imithetho Yesifundazwe sase-Quebec, e-Canada Akusebenzi kubahlali base-Quebec: Okukhethekile ngaphandle kwenhloso yokuphoqelela izahlulelo; Izinkantolo zase-Ontario, e-Canada Izakhamizi zase-Quebec: Izinkantolo zase-Quebec, e-Canada
E-Argentina, e-Bolivia, e-Chile, e-Colombia, e-Costa Rica, e-Dominican Republic, e-Ecuador, e-El Salvador, e-Guatemala, e-Honduras, e-Nicaragua, e-Panama, e-Paraguay, e-Peru, e-Uruguay e-State of California, e-United States Okukhethekile; Izinkantolo Zezwe Nezikahulumeni zaseSan Francisco County, CA noma e-New York, NY
E-United Kingdom Imithetho yaseNgilandi naseWales Okukhethekile
6.2 ISIKHUNDLA SESENZO SOKUHOXA
LAPHO KUVUNYELWA NGAPHANSI KOMTHETHO OSEBENZAYO, WENA NE-SPOTIFY NIVUMA UKUTHI NGAMUNYE ANGALETHA IZICELO NGOMUNTU KUPHELA EKHONWENI LAKHO NOMA ELAYO NGOKWENZA NJENGELUNGU ELIBHEKENE NOMA LESILINGANISO SESIKHUNDLA ESIMISELWE. Ngaphandle kokuthi nobabili ne-Spotify nivumelana, akekho umlamuli noma ijaji elingahlanganisa izimangalo zomuntu oyedwa noma ngenye indlela liphathe noma yiluphi uhlobo lommeleli noma isigaba esiqhubekayo.
Uma utholakala, uhlala, unamahhovisi, noma wenza ibhizinisi endaweni lapho Lengxenye 6.3. kuyasebenza, le mibandela elandelayo eyisibopho yokulamula isebenza kuwe:
6.3.1 Ukulungiswa kwezingxabano nokulamula
Wena ne-Spotify niyavuma ukuthi noma iyiphi ingxabano, isimangalo, noma impikiswano phakathi kwakho ne-Spotify evela ngokuxhumene noma ngokuhlobene nganoma iyiphi indlela kulezi Zivumelwano noma ebudlelwaneni bakho ne-Spotify njengomsebenzisi Wensizakalo (noma ngabe isuselwa kwinkontileka, ukuhlukumeza, umthetho, ukukhwabanisa, ukumelwa kabi, noma enye imfundiso yokuziphendulela yezomthetho, nokuthi izimangalo ezivela ngesikhathi noma ngemuva kokuqedwa Kwezivumelwano) kuzonqunywa ngokuphoqeleka okubophezelayo komuntu ngamunye. Ukulamula akwenzeki ngomthetho kunecala lasenkantolo. AKEKHO UMAHLULELI NOMA AMAJAJI EKULAMULENI, NOKUBUYEKEZWA KWENKANTOLO YOMKLOMELO WOKULAMULA KUNOMKHAWULO. Kungase kutholakale okulinganiselwe kunasenkantolo. Umlamuli kufanele alandele lesisivumelwano futhi angakhipha umonakalo kanye nempumuzo efanayo njengenkantolo (kuhlanganise nemali yabameli), ngaphandle kokuba umlamuli angeke anikeze usizo lokumemezela noma lokujezisa oluzuzisa noma ngubani ngaphandle kwalabo abathintekayo kulamulo. Lokhu kuhlinzekwa kokulamula kuzosinda ekunqanyulweni Kwezivumelwano.
Ngaphandle kwesigaba 6.3.1 esingenhla, wena ne-Spotify niyavuma ukuthi akukho lutho lapha oluzothathwa njengokuyekisa, ukuvimbela, noma ukukhawulela elinye lamalungelo ethu, nganoma yisiphi isikhathi, (1) ukuletha isenzo somuntu ngamunye enkantolo yezimangalo ezincane, ( 2) ukuphishekela izenzo zokuphoqelelwa ngokusebenzisa izinhlangano zamazwe, zombuso, noma zendawo lapho kusebenza khona lezo zenzo, (3) funa usizo olungokomthetho enkantolo yezomthetho, noma (4) ukufaka isimangalo enkantolo yomthetho ukubhekana nezimangalo zokwephulwa kwempahla yobuhlakani.
6.3.3 Imithetho yokuxazulula
Wena noma thina singaqala inqubo yokulamula. Noma yikuphi ukulamula phakathi kwakho ne-Spotify ekugcineni kuzoxazululwa ngaphansi Kwemithetho Yokulamula kwe-International Chamber of Commerce (i- "ICC") ngaleso sikhathi esebenza ("Imithetho ye-ICC") ngomlamuli oyedwa noma ngaphezulu oqokwe ngokuya ngemithetho ye-ICC, njengoba iguqulwe yilezi Zivumelwano, futhi izophathwa Yinkantolo Yamazwe Ngamazwe Yokulamula ye-ICC.
Noma yikuphi ukulamula kuzokwenziwa ngolimi lwesiNgisi futhi ngaphandle kwalapho kufunwa ngenye indlela umthetho ophoqayo wezwe eliyilungu le-European Union noma amunye amandla, umthetho ozosetshenziswa kunoma yikuphi ukulamula kuzoba ngumthetho [wombuso noma izwe elifanele ochazwe esigabeni 6.1], ngaphandle kokubheka ukukhetha noma ukungqubuzana kwemigomo yomthetho.
6.3.4 Isikhathi sokugcwalisa
Noma yikuphi ukulamula kufanele kuqale ngokugcwalisa imfuno yokulamula kungakapheli UNYAKA OWODWA (1) ngemuva kosuku iqembu eliqinisekisa isimangalo kuqala lazi noma kufanele lazi ngesenzo, ukweqiwa, noma iphutha elenza isimangalo; futhi ngeke kube nelungelo kunoma yiliphi ikhambi lanoma yisiphi isimangalo esingagunyaziwe phakathi naleso sikhathi. Uma umthetho osebenzayo uvimbela isikhathi esinqunyelwe unyaka owodwa sokuqinisekisa izimangalo, noma yisiphi isimangalo kufanele sifakwe esikhathini esifushane esivunyelwe umthetho osebenzayo.
6.3.5 Isaziso; Inqubo
Iqembu elihlose ukufuna ukuxazululwa kufanele liqale lithumele isaziso esibhaliwe sengxabano komunye, ngeposi eliqinisekisiwe noma nge-Federal Express (isiginesha iyadingeka), noma esimweni lapho singenalo ikheli lendawo elikufayela, ngekhompuyutha ("Isaziso"). Ikheli le-Spotify Lesaziso yileli: [Spotify, Attn: General Counsell, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA]. Isaziso kumele (1) sichaze uhlobo nesisekelo sesimangalo noma impikiswano; futhi (2) sibeke usizo oluthile oluceliwe ("Isidingo"). Siyavuma ukusebenzisa imizamo ethembekile yokuxazulula isimangalo ngokuqondile, kodwa uma singafinyeleli esivumelwaneni sokwenza lokho zingakapheli izinsuku ezingama-30 ngemuva kokutholwa kwesaziso, wena noma i-Spotify ningaqala ukuqhubeka kokulamula. Ngesikhathi sokulamula, inani lanoma yiliphi inani lokukhokhela okwenziwe nguwe noma yi-Spotify ngeke lidalulwe kumlamuli kuze kube ngemuva kokuba umlamuli enze isinqumo sokugcina nomklomelo, uma ukhona. Uma kwenzeka ingxabano yethu ixazululwa ekugcineni ngokulamula, i-Spotify izokukhokhela (1) inani elinikezwe umlamuli, uma likhona, (2) inani lokugcina elibhaliwe elinikezwe yi-Spotify ekuxazululeni ingxabano ngaphambi komklomelo womlamuli; noma (3) u-$ 1,000.00, nanoma yikuphi okukhulu. Wonke amadokhumenti nemininingwane edalulwe ngesikhathi sokulamula izogcinwa iyimfihlo ngokuphelele ngumamukeli futhi ngeke isetshenziswe ngumamukeli nganoma iyiphi inhloso ngaphandle kwezinhloso zokulamula noma ukuphoqelelwa kwesinqumo kanye nomklomelo womlamuli futhi ngeke idalulwe ngaphandle kwemfihlo kubantu abanesidingo sokwazi ngezinhloso ezinjalo noma njengoba kudingwa ngumthetho osebenzayo.Ngaphandle kwalapho kudingeka ukuphoqelela isinqumo nomklomelo womlamuli, wena noma i-Spotify ngeke nenze isimemezelo esidlangalaleni noma imibono yomphakathi noma niveze noma yikuphi ukukhangisa okuphathelene nokulamula, kuhlanganise, kodwa kungagcini lapho, ukuthi amaqembu ayaphikisana, ubukhona bokulamula, noma isinqumo noma umklomelo womlamuli.
Uma kwenzeka ukuthi i-Spotify yenze noma yiluphi ushintsho oluzayo kulokhu kuhlinzekwa kokulamula (ngaphandle kokushintshela ekhelini le-Spotify Lesaziso), ungalwenqaba noma yiluphi ushintsho olunjalo ngokusithumela isaziso esibhaliwe kungakapheli izinsuku ezingama-30 ushintsho luye ekhelini le-Spotify Lesaziso, lapho uma ngabe i-akhawunti yakho ne-Spotify izonqanyulwa ngokushesha futhi lokhu kuhlinzekwa kokulamula, njengoba kusebenza ngokushesha ngaphambi kwezichibiyelo ozenqabayo, kuzosinda.
Uma ukukhishwa kwesigaba Engxenyeni 6.2 kutholakala ukuthi akunakuphoqeleka ekulamuleni noma uma noma iyiphi ingxenye Yalengxenye 6.3 itholakala njengengavumelekile noma ingenakuphoqeleka, khona-ke ukuphela kwalesi Kwalengxenye 6.3 kuzoba yize futhi kungasebenzi futhi, esimweni esinjalo, izinhlangano ziyavuma ukuthi amandla kanye nendawo okuchazwe Engxenyeni 6.1 kuzophatha noma yisiphi isenzo esivela noma esihlobene Nezivumelwano futhi ngeke uvinjelwe ukuletha inqubo nganoma yisiphi isikhathi.
7. Mayelana Nalemigomo
Ngaphansi komthetho osebenzayo, ungase ube namalungelo athile angenakukhawulwa yinkontileka. Lemigomo ayihloselwe ukukhawulela lawo malungelo.
Singenza ushintsho Kulemigomo (kuhlanganise noma yimiphi imigomo nemibandela ye-Spotify efakwe lapha phakathi) ngezikhathi ezithile ngokukwazisa ngezinguquko ezinjalo nganoma yiziphi izindlela ezizwakalayo (ngaphambi kokuba ziqale ukusebenza), kuhlanganise ngokuthumela Isivumelwano esibuyekeziwe Ensizakalweni ye-Spotify (inqobo nje uma, ukuze kube nezinguquko ezibonakalayo, sizofuna ukwengeza leso saziso nge-imeyili, umyalezo ovela ngaphakathi, noma ezinye izindlela). Noma yiluphi ushintsho olunjalo ngeke lusebenze kunoma iyiphi ingxabano phakathi kwakho nathi evela ngaphambi kosuku esithumele ngalo Imigomo ebukeziwe, noma eminye imigomo nemibandela ye-Spotify, ifake lezo zinguquko, noma ikwazise ngenye indlela ngalezo zinguquko. Ukusebenzisa kwakho Insizakalo ye-Spotify ulandela noma yiziphi izinguquko Kulemigomo kuzokwakha ukwamukela kwakho lezo zinguquko. Uma ungafisi ukuqhubeka usebenzisa Insizakalo ye-Spotify ngaphansi Kwemigomo ebuyekeziwe, unganqamula i-akhawunti yakho ngokuxhumana nathi. Usuku lokuqala olubekwe ngaphezulu kwale dokhumenti lubonisa ukuthi Lemigomo yagcina nini ukuguqulwa.
Ngaphandle kwalapho kushiwo kulesisigaba noma njengoba kuvunyelwene ngokucacile ngokubhala phakathi kwakho ne-Spotify, Lemigomo yakha yonke imigomo nemibandela okuvunyelwene ngayo phakathi kwakho ne-Spotify futhi ingena esikhundleni sezivumelwano zangaphambili maqondana nodaba Lwalemigomo, noma ngabe ibhaliwe noma ngomlomo. Njengoba kuphawuliwe ngenhla, eminye imigomo nemibandela elawula ukusetshenziswa Kwensizakalo ye-Spotify ifakiwe lapha ngereferensi, kuhlanganise nemigomo nemibandela elandelayo: Nemigomo Yokunikezwa Kwemali Yokukhuthaza ye-Spotify; Imigomo Yekhadi le-Spotify; Iziqondiso Zomsebenzisi ze-Spotify; Inqubomgomo Yelungelo Lobunikazi le-Spotify; kanye Nemigomo Yomphakathi Wokusekela i-Spotify .
Ngaphandle kwalapho kushiwo ngenye indlela Kulemigomo, uma noma yikuphi ukuhlinzekwa Kwalemigomo kungagcinwa kungasebenzi noma kungaphoqeleleki nganoma yisiphi isizathu noma kunoma yiliphi izinga, ukuhlinzeka okusele Kwalemigomo ngeke kuthinteke, futhi ukusetshenziswa kokuhlinzeka kuzophoqelelwa kuze kube sezingeni elivunyelwe ngumthetho.
Noma yikuphi ukwehluleka okwenziwe yi-Spotify nanoma yimuphi umzuzi wenkampani yangaphandle ukuphoqelela Lemigomo nanoma yikuphi ukuhlinzekwa kwayo ngeke kuhoxise i-Spotify noma ilungelo lomzuzi wenkampani yangaphandle lokwenza kanjalo.
I-Spotify ingabela noma yimiphi noma yonke Lemigomo, futhi ingabela noma idlulisele, ngokuphelele noma ingxenye, noma yimaphi amalungelo noma izibopho zayo ngaphansi Kwalemigomo. Ungase ungeke unikeze Lemigomo, iphelele noma iyingxenye, noma udlulisele noma unikeze amalayisense amancane amalungelo akho ngaphansi Kwalemigomo, kunoma iyiphi inkampani yangaphandle.
Uhlelo Lwamahhala Lwedivayisi
South Africa (IsiZulu)